बरियारपुर : पश्चिमा बकबास - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
मंसिर १८, २०७१-
यसरी पश्चिमप्रतिको आँखा चिम्लाइ अज्ञानताले मात्र भएको होइन । एक विशुद्ध दासताले पनि भएको हो । त्यसैले 'नष्टाल्जिया' शब्द विशेषतः भारतबाट सिकेर प्रयोग गर्दा त्यो 'बि्रटिस औपनिवेशिक कालको आनन्द'लाई व्यक्त गर्ने मात्र शब्द हो, जुन हामीसँग सरोकार राख्दैन भन्ने बुझ्दैनन् नेपालीहरू । त्यो 'राज'ले 'ब्रिटिस राज'सँग धेरै सम्बन्ध राख्छ भन्ने बुझ्दैनन् । किन 'राणा नष्टाल्जिया'चाहिँं नहुने त्यसो भए ? भन्नेतिर जाँदैनन् नेपालीहरू ।
यी दुई नामहरू पनि टेलिभिजन च्यानलहरूकै हुन् । यी दुई खुब सिनेमा प्रसार गर्छन्, मार्शल आर्ट्सका, चाहे त्यो चिनियाँ साओलिन होस् वा जापानी जुडो वा कराँते सिनेमा । नेपाली लाहुरे- मंगोल अनुहारमा एक उग्र स्वामीभक्ति हुन्छ भन्ने कुराको व्यापक प्रचार छ । यसैले गर्दा समावेशीका नाममा मंगोलहरूका 'उद्धारकर्ता' उनीहरू आफू नै हुन् भन्ने ठान्छन् फिरंगीहरू । त्यसो त उनीहरूकै देशमा मंगोलहरू अर्थात् रेड इन्डियनहरूले दासताकै स्थानमा रहिदिएर उनीहरूलाई मानेकै छन् । तर त्यो रगतमा नश्लवाद छैन ठान्छन् नेपालीहरू, बडो विचित्र छ ।
जेएनयुमा अध्ययनरत दुई इसाई विद्यार्थीहरूलाई २०३१ सालमा विवाह गराइदिएर नेपाली राजनीतिमा पूर्ण स्थापित गराउने गेरुधारी अग्निवेश, जसको फेटालाई थुतेर अन्ना हजारे अभियानकर्ताहरूले इसाई शब्दावलीमै भन्ने हो भने 'डी फ्रकिङ' गरे, तिनै बरियारपुरमा गढीमाईको बलि निषेध अभियानको नेता पल्टिन नेपाल आए/ल्याइए ।
२५ वर्षअघि हेलिकप्टर चढेर झन्डै दस हजार हात्तीलाई गोली हानियो, अफ्रिकाका दक्षिणी भूभागमा र त्यसको मासुलाई टिनबन्दी गरेर हात्तीको मासु खाने 'रेसीपी' टाँसेर बजारमा बेचियो । त्यो विनाशमा यी २६ बाँदर मर्दा शोकसभा गर्ने 'नेफेज'का उग्र क्रान्तिकारी मानसिकताका अग्रज पश्चिमाहरू कहाँ थिए ?
पशु संहारका कुरा गर्ने तीन ओबीई (अर्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर तक्माप्राप्त) कुपर, किथ र लुमले, दुई सीबीई (क्रस अफ द ब्रिटिस एम्पायर तक्माप्राप्त) सुलेभान र परियटले आफ्ना एम्पायरभित्रको अष्ट्रेलिया उत्तरको तास्मानियामा लाखौं 'एबोरिजिन' र अमेरिका महादेशमा लाखौं आदिवासी 'रेड इन्डियन'हरूलाई बिनाअपराध गोली हानेर जनसंहार (जेनोसाइड) गरेको कुराको अब जवाफ दिनेे बेला भएन ?
बरियारपुरमा बलि दिएका जनावरका मासु खेर जान नदिई घर लगेर खान पाउने खुकुलो नियम बनाउने हो कि ? त्यसलाई परिशोधन गरेर मेला समितिले बजारमा लाने व्यवस्था गर्ने र आम्दानीले स्थानीय विकास गर्ने हो कि ? मेला अवधिभर अस्थायी 'स्लटर हाउस' बनाउने हो कि ? वैकल्पिक उपाय हुनसक्छन् । किनभने हात्ती र गैंडाजस्तो संरक्षित जनावर होइनन् राँगोहरू । तर त्यसले देशैको शिर निहुर्‍याएको ठान्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने पर्यटन सचिव त्यस पदका निम्ति सर्वथा अयोग्य छन् । आफूले करोडौं कुकुरमाथि खर्बाैं डलर वर्षेनि खर्च गर्ने तर अफ्रिकामा भोकमरी भएको गीत गाइरहने पश्चिमजस्तो असभ्य गोलार्ध अर्काे छैन भनेर बुझ्न नसक्ने शिरको यो देशलाई के काम ?
प्रकाशित: मंसिर १८, २०७१